Oviana ianao no nanatevin-daharana ny Global Voices? (Fandraisana anjara tamin’ny LAHATSARY) · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Jona 2019 4:01 GMT
(Lahatsoratra nivoaka tamin'ny volana Septambra 2015)
Nohararaotinay ny fahatongavan'ny mpikambana GV miisa 120 mahery nandritra ny Vovonana tamin'ny volana Janoary 2015 nanatontosana haingana ity lahatsary ity izay natolotra tamin'ny lanonana famaranana ny Vovonana.
Na izany aza, raha ny hevitro manokana, mbola vao drafitra voalohany ihany io—tiako isika raha manatontsoa voatra amin'izany izay ahitana ny maro kokoa amintsika araka izay azo atao.
Toy izao no natao raha naniry ny hiditra tao anatin'ilay lahatsary :
1. Alaivo sary (na alain'ny olon-kafa) manatrika ny fakantsary ny tenanao, sady milaza ny volana sy ny taona nidiranao tato amin'ny GV. Mba hampifanaraka izany dia ataovy mifanaraka amin'ny halebehan-tsary mirefy (16: 9) ny efijerin'ny fakatsarinao, ary ambarao amin'ny feo mafy ilay volana sy ny taona ary am-pireharehana araka izay azonao atao! Mety avokoa izay toerana hangalanao sary rehefa tsy mitabataba loatra ho antsika mba hahenoana ny feonao—araraoty izany mba hanomezana anay ny topi-maso momba ny fonenan'ny vondrom-piarahamonina misy anao.
2. Alefaso mailaka aty amiko ny lahatsary ao amin'ny georgiap ao amin'ny globalvoicesonline.org, na alefaso amin'ny tolotra fifampizarana dosie (ohatra Dropbox) ary omeo ahy ny rohy.
3. Fe-potoana farany: 15 Septambra 2015 .